နှစ်ချက် AC အမော်တာ drive ကို CPD35 - တရုတ် Ningbo Hilectro ပါဝါ Tecnology
ပုံစံ ထုတ်လုပ်သူအဆင့် CPD35
Power က modes သာ ele ctric, ဒီဇယ်, ဓာတ်ဆီ လျှပ်စစ်
mode ကို operate စစ်
rated စွမ်းရည် မေး rated စွမ်းရည် ကီလိုဂရမ် 3500
ဝန်စင်တာ က c rated ဝန်စင်တာ မီလီမီတာ 500
optional စွမ်းရည် Q2 600mm ဝန်စင်တာမှာစွမ်းဆောင်နိုင်မှု ကီလိုဂရမ် 3150
ဝန်အကွာအဝေး (ရှေ့ရပ်ဆိုင်းမှု) x က လမ်းဆုံလမ်းခွမျက်နှာပြင်မှ front ရိုးစင်တာ မီလီမီတာ 490
Wheelbase y က မီလီမီတာ 1720
အလေးချိန်ကိုသုံးပါ အသေးဆုံးစွမ်းရည်ဘက်ထရီအပါအဝင် 6.5 လိုင်းကြည့်ရှု ကီလိုဂရမ် 5350
ရိုး Loading ဝန် ရှေ့ ကီလိုဂရမ် 7920
ပြန်. ကီလိုဂရမ် 930
ကုန်ချ ရှေ့ ကီလိုဂရမ် 2427
ပြန်. ကီလိုဂရမ် 2923
တုရုမြို့အမျိုးအစား Pneumatic တာယာ, အစိုင်အခဲတာယာ အစိုင်အခဲတာယာ
တုရုမြို့အရွယ်အစား ရှေ့ 23 × 10-12
ပြန်. 200 / 50-10
ဘီးအရေအတွက် တပ်ဦး / သို့ပြန်သွားရန် 2/2
နင်း, တပ်ဦး b10 မီလီမီတာ 1100
နင်း, Rear b11 မီလီမီတာ 980
tilt Anglea/bရှေ့ဆက် / နောက်ပြန် ဒီဂရီ 6/10
လျှော့ချရွက်တိုင်အမြင့်, h12တန်းဘောင် မီလီမီတာ 2142
Std.Free ဓာတ်လှေကား h2 မြေပြင်ကနေ2တန်းစံတံခါးကိုဘောင်, မီလီမီတာ 120
Std.Lift အမြင့် h3 မြေပြင်ကနေ2တန်းစံတံခါးကိုဘောင်, မီလီမီတာ 3000
တိုးချဲ့ရွက်တိုင်အမြင့်, h42တန်းစံတံခါးကိုဘောင် မီလီမီတာ 4279
အမြင့်, အပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်းစောင့်တပ်ဖွဲ့ h6 မီလီမီတာ 2215
Std.Forks နှင့်အတူအရှည်, L1 မီလီမီတာ 3550
ချိတ်မကျြနှာကိုမှအရှည်, L2 မီလီမီတာ 2480
အမျိုးအစားမှာ width, B1 တခုတည်းသော မီလီမီတာ 1360
ခက်ရင်း s ကို / ကe/ ဌ မီလီမီတာ 50 × 125 × 1070
ချိတ် Carriage အတန်းအစား က ISO 2328, Type A / B / မရှိ, Class3, Type A
width ရထား B3 မီလီမီတာ 1100
မြေပြင်ရှင်းလင်းခြင်း M1 တံခါးကိုဘောင်အောက်မှာ မီလီမီတာ 142
m2 wheelbase ၏ Center က မီလီမီတာ 130
ညာဘက်ထောင့် stack မင်းလမ်း Ast L1000 × W1200 bracket ကနှင့်အတူ မီလီမီတာ 3645
Ast L1200 × W800 bracket ကနှင့်အတူ မီလီမီတာ 3845
Radius ကိုဖွင့် 'ဝ' မီလီမီတာ 2250
ခရီးသွားမြန်နှုန်း loaded / မြေပေါ်သို့ချ km / h 14/15
ရုတ်သိမ်းမြန်နှုန်း loaded / မြေပေါ်သို့ချ မီလီမီတာ / s နဲ့ 260/340
မြန်နှုန်းလျှော့ချ loaded / မြေပေါ်သို့ချ မီလီမီတာ / s နဲ့ 340/300
Max.Drawbar ဆွဲထုတ် loaded, 3min, rated N ကို 17000
Max.Gradeability / 1.5 / နာရီ rated loaded, 3min, % 17
Service ကိုဘရိတ် လည်ပတ် / ထိန်းချုပ်မှုနင်း / ဟိုက်ဒရောလစ် နင်း / ဟိုက်ဒရောလစ်
ယာဉ်ရပ်နားဘရိတ် စက်မှုလည်ပတ် / ထိန်းချုပ်မှုကို manual / စက်မှု / လက်စွဲစာအုပ်
ကားပဲ့ကိုင် ပုံစံ FHPS
AC အ Drive ကိုမော်တော် (AC) 60min, rating KW 10 × 2
AC အ Pump မော်တော် (AC) 5min, rating KW 20
ဘက်ထရီဗို့အား V ကို 80
rated ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည် ah / 5hr 560
ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်, မိ ah / 5hr 480
ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်, max ကို ah / 5hr 660
ဘက်ထရီအလေးချိန် Min.capacity ဘက်ထရီ, ကြည့်ရှုလိုင်း 6.4.1 ကီလိုဂရမ် 1200
Drive ကိုမော်တော်ထိန်းချုပ်ရေး transistors
ကယ်ဆယ်ရေးဖိအားနှောင်ကြိုး ဘား 176
tank စွမ်းဆောင်ရည် L ကို 50
ယခင်: နှစ်ချက် AC အမော်တာ drive ကို CPD30
နောက်တစ်ခု: နှစ်ချက် AC အမော်တာ drive ကို CPD20
1.5 တန်ချိန်နှစ်ဦး Ac Drive ကို Motors ကလျှပ်စစ် Forklift
2.0 တန်ချိန်နှစ်ဦး Ac Drive ကို Motors ကလျှပ်စစ် Forklift
နှစ်ချက် Drive ကိုလျှပ်စစ် Forklift
လျှပ်စစ် Forklift 1 Ton
လျှပ်စစ် Forklift 1.5 Ton
လျှပ်စစ် Forklift2တန်
လျှပ်စစ် Forklift3Ton
လျှပ်စစ် Forklift ထုတ်လုပ်သူများ
Ac မော်တော်အတူလျှပ်စစ် Forklift
ရောင်းရန်လျှပ်စစ် Pallet ဂျက်
လျှပ်စစ် Pallet ဂျက်စျေး
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး လျှပ်စစ် Forklift
High Quality ဟာ Off လမ်းမကြီး Forklift
ရောင်းရန်ဟာ Off လမ်းမကြီး Forklift
လျှပ်စစ် Forklift သန့်စင်သော